Ukufunyanwa kweepateni zendawo yezehlo zolwaphulo-mthetho kunye neentsingiselo ngumxholo onomdla kuwo nawuphi na uRhulumente okanye urhulumente wasekhaya. I-CAST ligama lesoftware yasimahla, ii-initials ze-Crime Analytics yeSithuba-Ixesha, eli…
NgoJuni 2011, iinguqulelo ezintsha zesoftware esetyenziswe kwizixhobo ze-Ashtech zakhululwa, ngoko xa kuthengwa izixhobo ezitsha, ezi nguqulelo aziyi kuza zifakwe. Ndisebenzisa eli nqaku ukubonisa apho...
I-Zonum Solutions yindawo enikezela izixhobo eziphuhliswe ngumfundi kwiYunivesithi yase-Arizona, owathi ngexesha lakhe lokuphumla wayezinikele ekubekeni ikhowudi kwizihloko ezinxulumene nezixhobo zeCAD, imephu kunye nobunjineli, ngokukodwa ngeefayile ze-kml. …
Kwizithuba zokugqibela sithetha ngedatha ekhutshelwe kwizixhobo zeMagellan, kwaye ukusuka apho kuvela isidingo sokucacisa malunga neenguqulelo ezahlukeneyo ze-MobileMapper Office. I-MobileMapper 6 Office Le yisoftware, eza xa...